Ukuhambelana kweGemini kunye neTaurus: ♥ Izichasi zizonke - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuhambelana kweGemini kunye neTaurus: ♥ Izichasi zizonke
I-Gemini kunye neTaurus baya kuwela kumgibe wokubambisana kwaye bagqibe ekubeni ngabahlobo. Fumana amanqaku abo okuhambelana kwaye ukuba banokudubula kunye.
Lo ngumdlalo wekati kunye nempuku kunokuba abantu ababini benze iziseko zobudlelwane. Esi sibini sidlala kunye, kodwa asisokuze sinxibelelane ngokwenyani ngeemvakalelo zabo, nto leyo eya kuthi ekugqibeleni ibabuyisele umva eluthandweni. Nangona aba bantu bomthonyama benemibono eyahlukileyo yothando, babonakala bephelelisana. Fumanisa le Gemini kunye neTaurus ehambelanayo amanqaku kwaye ingaba banayo na into efunekayo ukuze bathandane.
'I-Gemini kunye neTaurus ayivuleki ngokwaneleyo ngeemvakalelo zabo!'
Inqaku lokuhambelana kweGemini kunye neTaurus: 1/5
Umdlalo ongaphumeleliyo kodwa enye engeyiyo intlekele nayo. Taurus ubuntu ubambekile ezindleleni zabo, akathethi kakhulu, ngelixa uGemini egcwele yonke indawo, ethetha kakhulu kwaye exakekile. Ngoko ke, lo mdlalo wothando unomsebenzi onzima ekufuneka wenziwe ukuba baya kuhamba umgama. UGemini akakayazi into abayifunayo, ngelixa iTaurus iqinisekile ngayo. I-Taurus ithanda ukuba iGemini igcina izinto zilula, ngelixa iGemini ithanda ububele bukaTaurus kunye nobukho obuzolileyo. T i-aurus kufuneka izame kwaye ivumele ukulinda kwabo kwaye bathembe iGemini ukuba lo mdlalo ube yimpumelelo.
UTaurus uyamthanda uGemini icala funny and free kwaye ufumana isimo sengqondo sikaGemini sikhuthaza. UGemini uyayithanda iTaurus ubuntu obunobubele kwaye amandla azolileyo obuntu. UTaurus ngutitshala omkhulu wokuzimisela. Gemini, uyazi ukuba unokuhlala uthembele kwicala le-Taurus 'pragmatic kunye nengqiqo ukukunceda ubone ukukhanya. Kude nokuba kubude obufanayo, akukho nto ithintela le miqondiso mibini ukuba ihambelane. Enyanisweni, iTaurus ithanda uburharha kunye nokukhanya kweGemini, okumshukumisela ukuba ajikeleze, atshintshe imikhwa yakhe kwaye aphephe ukungena kwi-rut. UGemini uthanda ububele beTaurus, amandla akhe azolileyo. NgeTaurus, unokufunda ukuzimisela ngakumbi.
Uya kuba nobunzima obukhulu bokuqonda omnye nomnye kwaye Ukungaqondani kuya kujika kube yidrama kwaye ekugqibeleni wonakalise ubudlelwane bakho. Ngaloo ndlela, akunakwenzeka ukuba nibe nako ukucinga ngekamva kunye. Kwicala lentliziyo azikho kubude obufanayo. I-Taurus, esele ingathembeki kancinci ngokwemvelo, iya kukufumanisa kunzima ukuthembela kuGemini, ongenamdla wokuzibophelela kwaye uhlala ephucula ubomi bakhe njengesibini.
Iingxaki zonxibelelwano eziqhubekayo kunye neemfuno zakho ezahlukeneyo kwigumbi lokulala kungekudala ziya kuthintela ubudlelwane bakho. Kunzima ukuvuma xa uGemini, ethanda ubudlelwane obukhawulezayo kunye namandla, ngelixa iTaurus, ikhetha ixesha elide. Kuya kufuneka, nalapho, ukufunda ukuvuma.
Cacisa iimvakalelo zakho kunye nosukelo lwakho. Ukwenza ubudlelwane babo busebenze, abayi kuba nakhetho ngaphandle koku zichaze ngokucacileyo izinto abazilindeleyo ukususela ekuqaleni kobudlelwane babo.
uHabhuya; Ingelosi enguMgcini weNtlawulo kunye neMpilo